Rikoooo.com - Ny zava-misy ...
Ny zava-misy ...
Lahatsoratra tsy mbola novakiana • Lahatsoratra 1 • Pejy 1 of 1
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 02 Okt 2017, 10:43
Tao anatin'ny roa volana farany, very fiaramanidina mahatalanjona roa izay manodidina ny 40 taona i Eropa. Ho afaka hiteny aho fa, ny Air Berlin no zotram-piaramanidina tiako indrindra tany Eropa ... mampalahelo fa tsy misy intsony izy ireo.
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs nantsoina hoe airberlin na airberlin.com, no zotram-piaramanidina faharoa lehibe indrindra any Alemana, taorian'ny Lufthansa, ary ny kaompaniam-piaramanidina fahafito lehibe indrindra any Eropa amin'ny resaka mpandeha nentina. Izy io dia mitazona hubs ao amin'ny seranam-piaramanidina Berlin Tegel sy seranam-piaramanidina Düsseldorf ary manompo tanàna 12 alemana ary koa toeran-kaleha any Eropa, Karaiba ary Amerika.
Air Berlin dia mpikambana ao amin'ny alalàn'ny Oneworld, ary manana ny orinasa Belair any Switzerland raha ny fivarotana ny ziogna Australiana 49% NIKI amin'i Etihad Airways dia nambara tamin'ny volana Desambra 2016. Voatanisa ao amin'ny Frankfurt Stock Exchange izany. Ny Etihad Airways no mpandray anjara lehibe indrindra, satria nitombo ny fahazoan-bokany amin'ny 29.21% amin'ny 2011. Ny Air Berlin dia foibe any Charlottenburg-Wilmersdorf, faritr'i Berlin.
Tamin'ny 15 Aogositra 2017 Air Berlin dia nilaza fa nametraka ny tsy fandriam-pahalemana izy io, fa hitohy kosa ny sidina, amin'ny ampahany, noho ny trosa nomen'ny Governemanta Alemanina.
Monarch Airlines, fantatra ihany koa amin'ny hoe Monarch, dia charter britanika ary nisy fiaramanidina efa natsangana tao Luton, izay nitety sidina voatokana ho any amin'ireo toeran-kafa any amin'ny faritr'i Mediterane, Canary Islands, Cyprus, Egypt, Greece, Sweden ary Turkey. Ny foiben'ny fiaramanidina dia tao Luton, miaraka amin'ny fanorenana hafa any Birmingham, Leeds / Bradford, Gatwick ary Manchester. Monarch dia iray amin'ny zotram-piaramanidina anglisy tranainy indrindra tsy tokony hanova ny anarany tany am-boalohany alohan'ny hampijanonana ny fandidiana. Izy io dia nanodidina ny mpiasa 3,000 toy ny 1 Oktobra 2017.
Ny fiaramanidina dia nitondra ny mpandeha 5.7 tapitrisa nandritra ny 2015, ny fihenan'ny 19% raha oharina amin'ny 2014. Ny monarch dia tokony ho noraisina tao 2018 ny voalohany amin'ny fiaramanidina BAIing 45 MAX-737 vaovao 8. Ireo dia mety hanolo ny fiaramanidina A320 sy A321 amin'izao fotoana izao. Ny orinasa dia mitazona United Kingdom Civil Aviation Authority (CAA) Type A Operating Licence, mamela azy ireo hitondra mpandeha, entana ary mailaka amin'ny fiaramanidina misy 20 na seza maro hafa.
Ny monarch dia niditra tamin'ny fitantanana tao amin'ny 4: 30am tamin'ny 2 Oktobra 2017, ny fampitsaharana ny fandidiana tsy nisy vokany teo, teo amin'ny herintaona taorian'ny nielezan'ny fanaparitahana faingana. Ny tranokalan'ny fiaramanidina dia tantanan'ny CAA, ary ny raharaham-barotra sy ny mpiasa izay tarihin'ny KPMG.
Lahatsoratra 1 • Pejy 1 of 1